Fampandrenesana ara-dalàna sy ny toetoetran'ny fampiasana ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Fanamarihana ara-dalàna sy ny fepetra fampiasana
Ny tahirin-kevitra nijerena ny 25 / 03 / 2018
Raha tonga eto ianao, dia miahy ny ao ambadiky ny tranokala ity sy ny teny izay safidiko hifanerasera aminao ary vaovao lehibe ho ahy izany, satria tompon'andraikitra amin'ity tranokala ity.
Ny antony an'ity lahatsoratra ity dia ny manazava amin'ny an-tsipiriany ny fiasan'ity tranokala ity sy hanomezany anao ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ilay olona tompon'andraikitra sy ny tanjon'ny atiny tafiditra ao anatiny.
Ny data-nao sy ny fiainanao manokana no zava-dehibe indrindra amin'ity tranokala ity ary izany no antony anolorako hevitra anao mba hamaky koa ny Politika momba ny tsiambaratelo.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahalala hoe iza no tompon'andraikitra amin'ity tranokala ity. Ho fanarahana ny lalàna 34/2002, ny 11 jolay, momba ny serivisy fiarahamonina fampahalalana sy ny varotra elektronika, dia mampahafantatra anao izany:
• Ny anaran'ny orinasa dia: Online SL
• Hetsika ara-tsosialy dia: Web manam-pahaizana manokana amin'ny fitsipi-pivarotana an-tserasera maro.
Ny tanjon'ity tranokala ity
• Manome votoaty mifandraika amin'ny asan'ny Marketing Online.
• Mitantana ny lisitry ny mpamoaka bilaogy sy fanehoan-kevitra mody.
• Mitantana ireo atiny sy ny fanehoan-kevitra omena ireo tolotra atolotra.
• Mitantana ny tambajotra mifandraika amin'ny mpiara-miasa.
• Serivisy manokana sy serivisy fety fahatelo.
Fampiasana ny web
Amin'ny fampiasana ireo mpanara-tranonkala.online dia manao ny tsy fanaovana izay mety manimba ny sary, ny tombontsoany ary ny zon'ny mpanaraka azy.online na ny antoko fahatelo na mety manimba, tsy manafoana na mampihoatra ny mpanaraka ny tranokala. an-tserasera na mety hisorohana izany, amin'ny fomba rehetra ny fampiasana amin'ny Internet.
followers.online dia mandray fepetra hentitra azo antoka mba hamantarana ny fisian'ny otrikaretina. Na izany aza, ny mpampiasa dia tokony hahatsapa fa ny fepetra fiarovana amin'ny rafitry ny informatika amin'ny Internet dia tsy azo itokisana tanteraka ary noho izany dia tsy afaka manome antoka ny tsy fisian'ny virus na ireo singa hafa izay mety hiteraka fanovana ireo rafitry ny informatika. (rindrambaiko sy hardware) an'ny mpampiasa na amin'ny antontan-taratasiny sy ny rakitra elektronika ao anatiny.
Na izany na tsy izany dia voarara ny USERS (afaka mamafa ny atiny sy ny heviny izay heveriny fa mety) mitondra fihetsika izay misy:
• Mitahiry, mamoaka ary / na mamindra data, lahatsoratra, sary, rakitra, rohy, rindrambaiko na votoaty hafa maharikoriko araka ny fepetra ara-dalàna, na amin'ny alàlan'ny tombantomban'ny mpanara-dia azy.online noho izy tsy ara-dalàna, mahery setra, mandrahona, manararaotra, manala baraka, vetaveta, vetaveta, fanavakavaham-bolon-koditra, xenophobic na manafintohina na raha tsy izany dia tsy ara-dalàna na mety manimba ny karazany rehetra, indrindra ny pôrnôgrafia.
Amin'ny maha-mpampiasa anao dia ampahafantarina anao fa ny fidirana amin'ity tranonkala ity dia tsy midika velively, amin'ny fomba rehetra, ny fiandohan'ny fifandraisana orinasa amin'ny Online SL amin'ity fomba ity, ny mpampiasa dia manaiky ny hampiasa ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny nefa tsy mandika ny lalàna. ankehitriny, finoana tsara ary filaminam-bahoaka. Ny fampiasana ny tranokala ho an'ny tanjona tsy manara-dalàna na manimba, na amin'ny lafiny rehetra, dia mety hiteraka fahavoazana na manakana ny fiasan'ny tranonkala mahazatra dia voarara.
Mikasika ny atiny amin'ity tranonkala ity dia voarara:
• Ny famerenany, ny fizarana na ny fanovana, amin'ny ankapobeny na amin'ny ampahany, raha tsy omen'ny alalàn'ny tompony fahazoan-dàlana;
• fanitsakitsahana ny zon'ny mpanome na tompon'ny ara-dalàna;
• Ny fampiasana azy ho an'ny tanjona ara-barotra na dokambarotra.
Politika fiarovana sy tsiambaratelo
Online SL dia manome antoka ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra omen'ny USERS sy ny fitsaboana azy ireo mifanaraka amin'ny lalàna ankehitriny momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, rehefa nandray ny ambaratonga fiarovana ilaina amin'ny fiarovana ny angona manokana.
Online SL dia mandray andraikitra hampiasa ny angona voarakitra ao amin'ny fisie "WEB Users AND SUBSCRIBERS", hanaja ny tsiambaratelo sy hampiasa azy ireo mifanaraka amin'ny tanjon'izany, ary koa hanaraka ny adidiny hamonjy azy ireo ary hampifanaraka ny fepetra rehetra Mba hialana amin'ny fanovana, fatiantoka, fitsaboana na fidirana tsy nahazoana alàlana, mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny didim-panjakana 1720/2007 tamin'ny 21 desambra, izay mankato ny lalàna mifehy ny fampandrosoana ny lalàna voajanahary 15/1999 amin'ny 13 desambra, Fiarovana ny angon-drakitra manokana.
Ity tranonkala ity dia mampiasa rafitra samihafa amin'ny fakana ny mombamomba anao manokana voalaza ao amin'ny Politikan'ny tsiambaratelo sy ny toerana anaovana tatitra an-tsipiriany ireo fampiasana sy tanjona. Ity tranonkala ity dia mitaky ny fahazoan-dàlana alohan'ny mpampiasa hanodinana ny angon-drakitra manokana momba ny tanjona voalaza.
Ny mpampiasa dia afaka mampiasa, mikasika ny angona nangonina, ny zo ekena ao amin'ny Lalànan'ny Organisialy 15/1999, ny fidirana, ny fanitsiana na ny fanafoanana ny angona sy ny fanoherana. Mba hampiharana ireo zony ireo, ny mpampiasa dia tsy maintsy manao fangatahana an-tsoratra sy voasonia mba hahafahan'izy ireo mandefa, miaraka amin'ny photocopy ny ID-na taratasy mitovy aminy, amin'ny adiresy paositra Online SL na amin'ny alàlan'ny mailaka, nametaka kopia ID iray tamin'ny: info (at) followers.online. Alohan'ny 10 andro dia hovaliana ny fangatahana hanamafisana ny fanatanterahana ny zony izay nangatahinao hampiasaina.
Ny Online SL dia mampahafantatra fa misy ny taratasy fitarainana mety ho an'ny mpampiasa sy ny mpanjifa.
Ny mpampiasa dia mety mitaky fangatahana amin'ny alàlan'ny fangatahana ny takelaka fitakiana na amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny info (at) followers.online manondro ny anaranao sy ny anaranao, ny serivisy na ny vokatra novidina ary nilaza ny anton'ny fitakianao.
Azonao atao koa ny mitarika ny fangatahanao amin'ny alàlan'ny paositra: Online SL, amin'ny fampiasana, raha tianao, ity takelaka takiana manaraka ity:
Ho an'ny sain'ny: Online SL
Mailaka: fampahafantarana (amin'ny) followers.online
• Anaran'ny mpampiasa:
• adiresy mpampiasa:
• sonia mpampiasa (raha aseho amin'ny taratasy):
• Antony ho fitakiana:
Amin'ny alàlan'ireto fepetra ankapobeny ireto dia tsy misy zon'ny fananana ara-tsaina na indostrialy afindra amin'ireo mpanaraka tranonkala.n'ny zana-tany izay an'ny Online SL ny fananana ara-tsaina, ny fananahana, ny fanovana, ny fizarana, ny fifandraisana amin'ny besinimaro, ny fanolorana ho an'ny besinimaro, ny fitrandrahana dia voarara tanteraka ho an'ny mpampiasa. , fampiasana indray, fandefasana na fampiasana ny natiora rehetra, na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona, amin'iza amin'izy ireo, afa-tsy amin'ny tranga izay avelan'ny tompon'ny zony mifanitsy aminy ara-dalàna.
Ny mpampiasa dia mahalala sy manaiky fa ny tranokala iray manontolo, izay tsy misy fetrany ny lahatsoratra, ny rindrambaiko, ny votoatiny (anisan'izany ny firafitra, ny fifantina, ny fandaharana ary ny fanolorana azy) ny sary, ny fitaovana sy ny fomba fijerin'ny haino aman-jery, dia arovan'ny mari-barotra, ny zon'ny mpamorona. sy ny zo ara-dalàna hafa voasoratra, araky ny fifanarahana iraisam-pirenena izay misy an'i Espana dia fety sy fananana fananana hafa ary lalàna an'ny Espana.
Raha heverin'ny mpampiasa na ny antoko fahatelo fa nisy ny fanitsakitsahana ny zon'izy ireo ara-tsaina ara-dalàna noho ny fampidirana atiny sasany ao amin'ny Internet, dia tokony hampandre izany amin'ny Internet SL izy ireo momba an'io toe-javatra manondro io:
Lazao ny zavatra voaro amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny toerany ao amin'ny Internet, ny fanekena ny zon'ny fananana ara-tsaina ary ny fanambarana manaporofo fa ny antoko liana dia tompon'andraikitra amin'ny maha-marina ny vaovao nomena ao amin'ny fampahafantarana.
Ny Online SL dia mandà ny andraikitra rehetra momba ny fampahalalana hita ivelan'ity tranokala ity, satria ny fiasan'ny rohy miseho dia ny mampahafantatra ny mpampiasa ny fisian'ny loharanom-baovao hafa amin'ny lohahevitra manokana. Ny SL an-tserasera dia madiodio amin'ny andraikitra rehetra amin'ny fampandehanana marina ny rohy toy izany, ny valiny azo tamin'ny alàlan'ireo rohy voalaza ireo, ny fahamarinana sy ny maha ara-dalàna ny atiny na ny fampahalalana azo zahana, ary koa ny fahasimbana mety iharan'ny mpampiasa. noho ny fampahalalana hita tao amin'ny tranonkala mifandraika.
Ny Online SL dia tsy manome antoka na tompon'andraikitra amin'izany, na amin'ny inona na inona, noho ny fahasimbana na inona na inona mety ho vokatry ny:
• Ny tsy fisian'ny fisianana, fikojakojana ary fandefasana mahomby amin'ny tranokala na ny serivisy sy ny atiny;
• Ny fisian'ny virus, maloto na manimba programa ao amin'ny atiny;
• Tsy ara-dalàna, tsy mitandrina, mamitaka na mifanohitra amin'ity Fanamarihana ara-dalàna ity;
• Ny tsy fisian'ny maha-ara-dalàna, kalitao, fitokisana ary ilaina ny serivisy omen'ny antoko fahatelo ary omena ny mpampiasa amin'ny tranonkala.
Tsy omena andraikitra ny mpamatsy tolotra amin'ny fahavoazana mety hitranga amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna na tsy mety amin'ity tranokala ity.
Amin'ny ankapobeny, ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanaraka.naraka amin'ireo Mpampiasa ny serivisim-pifandraisan-davitra misy azy eo amin'ity tranonkala ity dia iharan'ny lalàna sy ny fahefana Espaniola ary ny Courts of Granada.
Raha misy manontany momba an'io fanamarihana ara-dalàna io na misy mpampiasa momba ny mpanaraka ny tranokala.online dia afaka mifandray amin'ny mpanaraka (at) followers.online ianao
followers.online dia manana zo hanova, amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy fampandrenesana mialoha, ny fanolorana sy ny fanamafisana ny mpanaraka tranokala.online ho toy izany fanamarihana ara-dalàna izany.